डाटा स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ? १० उपयोगी वेब स्क्र्यापि Services सेवाहरू तपाईंले Semalt अनुसार प्रयास गर्नु पर्छ
वेब स्क्र्यापि एक स्क्र्यापिंग उपकरणहरूको साथ लागू गरिएको एक जटिल तकनीक हो। यी उपकरणहरूले फायरफक्स वा क्रोम जस्ता ब्राउजर प्रयोग गर्दा हामी पनि विभिन्न वेबसाइटहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछौं। यसबाहेक, वेब स्क्र्यापि programs प्रोग्रामहरूले पठाइएको ढाँचामा झिकिएको डाटा प्रदर्शन गर्दछ। तिनीहरूले अधिक नेतृत्व सिर्जना गर्न र हाम्रो व्यवसायबाट राम्रो प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन्।
उत्तम वेब स्क्र्यापि Tools उपकरण:
यहाँ हामीले उत्तम र सबैभन्दा उपयोगी वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरूको सूची दिएका छौ, जसमध्ये केही नि: शुल्क छन् जबकि अन्यलाई भुक्तान गरिन्छ।
Import.io यसको उन्नत टेक्नोलोजीको लागि प्रसिद्ध छ। उपकरण पेशेवरहरू र गैर-पेशेवरहरूको लागि उपयुक्त छ। यो वेब स्क्र्यापिंग उपकरणले धेरै संख्याका वेबसाइटहरूमा पहुँच र स्क्र्याप मात्र गर्दैन तर निकालेका डाटालाई CSV मा निर्यात गर्दछ। Import.io को साथ एक घण्टा भित्र सयौंदेखि हजारौं पृष्ठहरू र PDF फाइलहरू स्क्रयाप गर्न सकिन्छ। प्लस पोइन्ट भनेको तपाईलाई कुनै पनि कोड लेख्नु पर्दैन। यसको सट्टामा, यो उपकरणले तपाईंको आवश्यकताको आधारमा 1000 भन्दा बढी एपीआईहरू निर्माण गर्दछ।
Dexi.io क्लाउडस्क्र्यापको रूपमा पनि परिचित छ। यो वेब स्क्र्यापिंग र डाटा एक्सट्रेसन प्रोग्राम प्रोग्रामरहरू र फ्रीलांर्सरहरूको लागि उपयुक्त छ। यो यसको ब्राउजरमा आधारित डाउनलोडर र सम्पादकका लागि व्यापक रूपमा परिचित छ जुन तपाईको हार्ड ड्राइभमा निकालिएको डाटा पहुँच र डाउनलोड गर्न सजिलो बनाउँदछ। साथै, यो एक उत्तम वेब क्रॉलर हो कि डाटा या त Box.net वा Google ड्राइभमा बचत गर्न सक्दछ। तपाईं आफ्नो डेटा CSV र JSON मा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ।
Webhouse.io एक धेरै आश्चर्यजनक र शानदार ब्राउजरमा आधारित वेब स्क्र्यापिंग अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। यो संरचित डाटा को लागी सजिलो र सीधा पहुँच प्रदान गर्दछ र एकल एपीआई मा वेब पृष्ठ को ठूलो संख्या को अनुक्रमणिका गर्न को क्षमता छ। तपाईं सजिलैसँग Webhouse.io प्रयोग गरेर तपाईंको डाटा निकाल्न सक्नुहुन्छ र RSS, XML, र JSON जस्ता ढाँचामा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रति महिना केवल $ २ With को साथ, तपाईं Scrapinghub का सबै आश्चर्यजनक सुविधाहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो क्लाउड-आधारित अनुप्रयोग हो जुन तपाईंको डेटा निष्कर्षण आवश्यकतालाई अझ राम्रो तरीकाले पूरा गर्दछ। Scrapinghub यसको स्मार्ट प्रोक्सी रोटेटरको लागि राम्रोसँग परिचित छ जुन बोट सुरक्षित वेबसाइटहरूमा सुविधाजनक रूपमा क्रल गर्दछ।
Vis. भिजुअल स्क्र्यापर
भिजुअल स्क्र्यापर अझै अर्को डेटा निकाल्ने र सामग्री खनन कार्यक्रम हो। यसले विभिन्न वेबसाइटहरूबाट जानकारी निकाल्छ, र परिणामहरू वास्तविक समयमा ल्याइन्छ। तपाईं तपाईंको झिकिएको डाटा SQL, JSON, XML, र CSV जस्तै ढाँचामा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ।
Out. आउब आउट हब
यो फायरफक्स एड-अन हो जुन हाम्रो वेब खोजीलाई यसको डाटा निष्कर्षण सुविधाहरूको कारणले सरलीकृत गर्न सक्दछ। आउटविट हब प्रोग्रामरहरू र वेब विकासकर्ताहरूमाझ समान रूपमा प्रसिद्ध छ; यस उपकरणले तपाईको डेटालाई पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा भण्डार गर्दछ, उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस र उत्तम सेवाहरू प्रस्ताव गर्दै।
यो सत्य हो कि स्क्र्यापरसँग सीमित डाटा स्क्र्यापिंग सुविधाहरू छन्, तर यसको मतलब यो होइन कि यसले तपाईंको अनलाइन अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउँदैन। वास्तवमा, Scraper विभिन्न उद्यमहरू, एसईओ विशेषज्ञहरू, र अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूको पहिलो विकल्प हो। तपाईं क्लिपबोर्डमा डाटा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको इच्छा अनुसार फरक स्प्रिेडसिटमा भण्डारण गर्न सक्नुहुनेछ। दुर्भाग्यवस, यो उपकरण तपाइँको वेब पृष्ठहरु क्रल छैन।
यो एक मजबूत, लचिलो, र उपयोगी वेब स्क्र्यापिंग अनुप्रयोग हो। तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार legs० खुट्टा कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, र यस उपकरणले केहि सेकेन्डमा आवश्यक जानकारी ल्याउँछ।
Spinn3r एक सम्पूर्ण वेबसाइट, सामाजिक मीडिया नेटवर्क, समाचार आउटलेटहरू र निजी ब्लगबाट डाटा ल्याउँदछ, तपाईंको डाटा JSON ढाँचामा बचत। यसको अद्भुत डाटा निष्कर्षण गुणहरूका साथै, Spinn3r ले तपाईंको डाटाको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दछ र स्प्यामरहरूलाई यसलाई चोर्न दिदैन।
ParseHub AJAX, कुकीहरू, जाभास्क्रिप्ट, र रिडिरेक्टहरू प्रयोग गरेर वेबसाइटहरूसँग उपयुक्त छ। तपाईं चाहानु भए जति वेब पृष्ठहरू क्रल गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक ढाँचामा डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण म्याक ओएस एक्स, विन्डोज, र लिनक्स प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।